FBI-da Maraykanka oo sheegtay in liiska dadka la doon doonayo ay ku dartay Abuu Mansuur Al-Amriiki - iftineducation.com
iftineducation.com – Hey’adda dembi baarista Maraykanka ee FBI ayaa sheegtay in liiska dadka la doon doonayo lagu daray Cumar Shafiikh Xamaami oo loo yaqaano Abuu Mansuur Al-Amriki kaasoo ka mid ah dagaalyahanada ajaaniibta ah ee ka barbar dagaalama Xarakadda Al-Shabaab.
Cumar Xamaami ayaa sida la aaminsan yahay ku biiray Xarakadda Al-Shabaab sanadkii 2006-dii, isagoo door wanaagsan ka cayaaray dagaalada ay Shabaab galeen.
FBI-da Maraykanka waxay sheegtay in Abuu Mansuur Al-Amriki uu si weyn ugu lug leeyahay falal argagixiso isla markaana uu dambi ka galay dalka Maraykanka uuna ka mid yahay dadka la baadi goobayo.
Sidoo kale waxay ku eedeeyeen Abuu Mansuur inuu halis ku yahay amaanka Maraykanka isla markaana uu u hanjabay markii ciidamada Maraykanka ay ku dileen dalka Pakistan hogaamiyiihii Al-Qacida oo sanadkii hore.
Abuu Mansuur Al-Amriiki ayaa Al-shabaab u qaabilsan howlo ay ka mid yihiin inuu dad cusub oo ajaaniib iyo Soomaaliba leh ku qalqaaliyo iney ka mid noqdaan kana barbar dagaalaamaan Al-Shabaab, waxaana uu sheegay inuu u jeclaan lahaa inuu ku dhinto duqeynta dayuuradaha Droneska ama gantaalaha Maraykanka si uu u shahiido.
Maxaad kataqaan ragga aduunyada ugu qanisan (aqriso lacagta ay heestaan inta ay la egtahay oo Daawo sawirada qaar kamid ah dadka ugu hantida badan dunida)